Nchịkọta 2014 na Tredị maka Businesslọ Ahịa na Social Media | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi anaghị aga ebe ọ bụla, ụlọ ọrụ na-achọpụta ugbu a na ọ bụrụ na ha chọrọ iru atụmanya ha na ndị ahịa ha, ọnụnọ ha n'ịntanetị na mgbasa ozi ọha na eze bụ ntọala nke atụmatụ ahịa ha niile. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe omimi di omimi, site na ulo oru, ndi ozo, na ndi mmadu, banyere otu ulo oru si eme ka ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu.
Ma ndị nta ma ndị azụmaahịa na-achọpụta mmetụta nke ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-emetụta na echiche ọha mmadụ. Ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ ọrụ na-achọ ndị a na-eme ihe ike na saịtị dị iche iche na mgbasa ozi mgbasa ozi ma na-ezigara ha ihe nlele ngwaahịa n'efu ka ha nyochaa. Na infographic na-esonụ, Ulo oru na Social Media - Statistics na nddị, Go-Gulf na-enye ọtụtụ stats na ọnọdụ ndị na-egosi etu azụmaahịa si eji mgbasa ozi mmekọrịta na-eme ka azụmahịa baa ụba.
Tags: b2b elekọta mmadụ mediaechiche azụmahịaazụmahịa na-elekọta mmadụ media statsegonkuchi azụmahịa facebookgoogle + ịzụ ahịa azụmahịaminit ole kwa ụbọchịinstagram azụmahịa dorookomoko ụdịekwentị mkpanaaka mgbasa ozipinterest azụmahịa doron'ọkwáihe mere ị ga - eji gbasata ụdị dị na mgbasa ozismb elekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ mediaego mgbasa ozi mmekọrịtamgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụechiche mgbasa oziụdị mgbasa ozi mmekọrịtaịkparịta ụka n'ingntanet statsnkuchi azụmahịa twitteromume ịzụta twitter
Ọkt 2, 2014 na 8:00 AM
Hụrụ ihe nkiri ahụ n'anya! Ikekọrịta na ụmụazụ m ugbu a! A na-eji mgbasa ozi ọha mmadụ eme ihe taa, ma ọ ka na-eju m anya ọtụtụ ndị na-eme ya n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọ dị mkpa ma rụọ ọrụ nke ọma oge ha ịme nyocha na ịgụ n'ime mgbasa ozi mgbasa ozi iji jide n'aka na a na-eme ya n'ụzọ ziri ezi!
Ọkt 2, 2014 na 11:11 AM
Daalụ Brandon! Na nkwanye ugwu - Amaghị m nke ọma "ụzọ" ma ọ bụ "ezighi ezi" iji jiri mgbasa ozi mmekọrịta dịka ụlọ ọrụ. M na-ahụ ụfọdụ na naanị tweet mgbasa ozi na ego - ma ha na-enweta ụfọdụ oké mgbapụta udu ya mere onye ka m ga-ekpe ikpe? Echere m na ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịnwale ma hụ ihe na-arụ ọrụ maka ha na ndị na-ege ha ntị.
Dee 24, 2014 na 6: 46 AM
Ihe osise gị dị egwu ma m mụtara ọtụtụ ihe na nke a. D IT KA Ọ KWES ER E MGBE! Di ma obu nwunye ya
Jenụwarị 22, 2015 na 2:50 PM
nke a bụ ihe ịtụnanya ibe weebụ. kariri inye aka, daalụ
Akwụkwọ Ego Social
Feb 20, 2015 n’elekere 10:36 nke abali
Kupọns na-elekọta mmadụ na-eme ka ụgha na-adabere na mbelata ego. Ọ bụ naanị usoro nke ibido ahịa nwa oge.
Feb 20, 2015 na 12:42 PM
Amaghị m na m kwenyere kpamkpam. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị achọpụta na enwere ihe mkpali maka ịrapara n'ahụ gị ogologo oge, ha na-esokarị gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ndị na-abụghị. Ha na-ewepu ego maka ndị ahịa ọhụrụ wee bulie ndị ahịa dị ugbu a… nke na-akpali ntụgharị kama.
Ezigbo ihe omuma banyere ihe omuma. M ga-akọrọ ndị ahịa banyere ikpo okwu dị ike nke mgbasa ozi mmekọrịta. Daalụ maka inye!
Ezigbo uru! Ọ bụrụ na ị gbasaghị m, enwere m ike iji nke a maka akwụkwọ ozi m? (Abụ m nwa akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ a rụpụtara)
You ga-akpọtụrụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ izizi ekwere na infographic, Roxie. Echiche kacha mma.
Taa, Mgbasa mgbasa ozi aghọwo igwe nyocha ọzọ ebe ndị ọrụ na-achọ ihe ọmụma zuru ezu gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọbụna Nnukwu sdị na-elekwasị anya iji melite ọnụnọ ha n'ịntanetị na Social Media.